အမေဇုံက iPhone မှာတေးဂီတကိုနားထောင်ပြီးနားထောင်ဖို့ 'dongle' တစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်တယ် Gadget သတင်း
အမေဇုံက iPhone မှာတေးဂီတကိုဖွင့်နိုင်၊ နားထောင်နိုင်အောင် 'dongle' တစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်တယ်
Ruben gallardo | | ပစ္စည်းများ, အမေဇုံ
၃.၅ မီလီမီတာအသံပေါက်ကိုမိုဘိုင်းဒီဇိုင်းများမှဖယ်ထုတ်ရန် Apple မှတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ မကြာသေးမီကဂူဂဲလ်သည်လည်း၎င်းကိုအသစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် Google က Pixel 2။ ဒါပေမယ့်ဒီဆက်သွယ်မှုကို Cupertino ကနေဖယ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပြproblemနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ အခုငါဘယ်လိုတေးဂီတကိုတစ်ချိန်တည်းမှာနားထောင်ပြီးနားထောင်မလဲ။ ဒါပါ Lightning Port သည်ဤလုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်.
သို့သော်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကုမ္ပဏီများကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခု Belkin ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်များသောနည်းပညာဆက်စပ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီသည် port တစ်ခုပါ ၀ င်သည့် adapter ကိုကမ်းလှမ်းသည် လှပျြစစျ မိုဘိုင်းနှင့်တစ် ဦး အားသွင်းရန် jack ကို နားကြပ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်စေရန် 3,5mm ။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းမှာ ၃၄.၉၉ ယူရိုဖြစ်သည်။ ယခုအမေဇုံသည်၎င်း၏ AmazonBasics အမျိုးအစားအောက်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းချိုသာသည်နှင့်လည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပို function ကိုကမ်းလှမ်း.
အမေဇုံ၊ အွန်လိုင်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏iantရာမ ပြproblemsနာအားလုံးအတွက်ဖြေရှင်းနည်းတွေပေးနိုင်ဖို့အမြဲသတိထားနေတယ်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ကျောပိုးအိတ်များမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထိကြွက်များ၊ ဖျာများ၊ ဆက်သွယ်မှုကြိုးများစသဖြင့်အရာအားလုံးကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ယခုမှာဤထည့်သွင်းထားသည် port နှင့်အတူ adapter လှပျြစစျ နှင့်အသံပေါက်.
အရောင်းကြေညာချက်အရ Amazon မှဒီ dongle သည် iPhone7နှင့် iPhone7Plus နှစ်ခုလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ iPhone 8 နှင့်၎င်း၏အစ်ကိုဖြစ်သူ Plus version တို့နှင့်အတူတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့သင်လုပ်နိုင်တာပဲ ပုဒ်၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ပါ သင်ကစားနေသည်၊
ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ ဘာကင့် Belkin ဗားရှင်းရဲ့စျေးကစျေးကြီးလွန်းတယ်ဆိုရင်၊ ဒီအမေဇုံအသုံးအဆောင်ကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပိုပေးနိုင်ပြီး ၂၉.၉၉ ယူရိုအထိလျှော့ချတယ် သငျသညျချုပ်ဝန်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်အခမဲ့သင်္ဘောနှင့်အတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » အမေဇုံက iPhone မှာတေးဂီတကိုဖွင့်နိုင်၊ နားထောင်နိုင်အောင် 'dongle' တစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်တယ်
WhatsApp Business သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်၎င်း၏ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများကိုစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောဤနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်